मसालेदार खाना: hrenoder टमाटर "Ogonyok", मसालेदार बैगुन
धेरै आनन्द ल्याउँछ अधिकांश मानिसहरू लागि ताजा खाना। जीवन र यति धेरै हामीलाई उज्ज्वल घटनाहरू, खाना कहिलेकाहीं धेरै वास्तविक अर्थमा मा खुर्सानी थप्न चाहनुहुन्छ भनेर पनि सतर्क मान्छे Indulge छैन। तदनुसार, मसलादार खाना सान्दर्भिकता कहिल्यै गुमाउनु हुनेछ। चिकित्सा प्रतिबन्ध कहिलेकाहीं उपेक्षा र पूर्ण व्यवस्था-पालन मान्छे। र तपाईं ध्यान दिएर एक आहार पालना भने, तपाईं पेट रक्षा र शायद आफैलाई ठिक सानो ज्यादै पुलपुल्याउने, हाम्रो व्यञ्जनहरु एउटा प्रयोग: तिनीहरूले तपाईंलाई साँच्चै उम्दा आनन्द दिन्छ।
Subtly मसालेदार चरा
हाम्रो आहार मासु घटक मा यो अक्सर एक चिकन छ। यसलाई स्वाद नभएको विचार भन्ने तथ्यलाई बावजुद, रसदार सरल पर्याप्त मासु पकाउन। तपाईं बस लसुन पाँच चोट लौंग, तीव्र केचप, केही फेला, नुन, मरिच, धनिया पाउडर, hops-suneli र चार थोपा पाँच चमचा मिलेर एक विशेष सस मा खटाई मा हालन छ Tabasco सस। बर्ड (वा यसको भागहरु) राम्रो marinade संग lubricated छन् र चालीस मिनेट प्रेस अन्तर्गत राखिएको छ। Aerogrill मा एक आधा घण्टा (वा सानो अब ओवन मा) को लागि यो Bake रहने र तीव्र चिकन खान तयार छ। यो जडीबुटी, तरकारी र द्वारा पूछे जाने रोटी विशेष गरी राम्रो छ।
विशेष गरी स्वादिष्ट मसालेदार व्यञ्जन मेक्सिकन व्यञ्जनहरु द्वारा तयार छन्। निस्सन्देह, तिनीहरूले विदेशी सामाग्री आवश्यक, तर यदि तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न इच्छा छ त्यसैले गाह्रो छैन। तर मेक्सिकन मा मसालेदार व्यञ्जन को तयारी बस प्राविधिक। सामना गर्न सक्छौं र साईट कुक।
ब्रश Physalis पाँच पूर्ण नरम सम्म पकाएको मिनेट को आधा किलो। उहाँले सबै मसला, जो बीच एक ब्लेंडर मा राखिएको छ:
Poblano मरिच, दुई कोसा।
Serrano खुर्सानी, साथै।
तीन लसुन लौंग।
ताजा cilantro को 0.5 कप।
Seasonings जमीन: अजवायन र जीरा, खुर्सानी र धनिया को आधा को spoonful, allspice quartered।
पानी को एक चौथाई कप थप्न र वर्दी सम्म मिश्रण।
boneless पोर्क स्लाइस को 700 ग्राम ब्लेड कटौती, र एक कुरकुरा गर्न तला छन् नुन संग rubbed। मासु सस pripuskayut देखि रस, यो पोर्क र आधा निचोडा कागती फर्काउँछ। चौथो बुझाने घन्टा - र तपाईंले आनन्द उठाउन सक्छौं।
टेक्सास खुर्सानी + मेक्सिको =
स्वादयुक्त मसालेदार व्यञ्जन निर्माण र बीफ संग sausages गर्न सकिन्छ। प्रसिद्ध मेक्सिकन खुर्सानी retouched Texan ranchers, जल घुमाउँदछ सुगन्धित र स्वादिष्ट।
पकवान को chorizo ससेज, तर फिट र पसलहरु semis मा बेचिन्छ ती कुनै पनि अन्य राख्न मानिन्छ छ। यसलाई हल्का तन सम्म तलना र एक कचौरा मा बदलाव र पैन (सिर्फ एक पाउन्ड भन्दा बढी) बीफ पट्टिका को सानो टुक्रा राख्नु पर्छ। जब तिनीहरूले सुनको खैरो हो र मासु को sausages गर्न हटाइएको छ। रस तीन चोट तला chesnochin र मध्य बल्ब को ठूलो खण्डहरूमा देखि बनेको छ। पछिल्लो नरम गर्दा अजवायन को दुई spoonfuls र जमीन फारममा ancho खुर्सानी को एक चौथाई कप थप्नुहोस्। एक मिनेट पछि, आन्दोलन टमाटर पेस्ट को 0.25 कप र सिरका (रातो) को एक चमचा शुरू। चटनी चिल्लो छ, यो सबै एक घण्टा बारेमा मासु सामाग्री र स्ट्यु कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। भएको मासु कोमल प्राप्त, तपाईं मकैको पिठो को spoonfuls को एक जोडी थप्न अर्को पाँच मिनेट स्टोभ मा पट भिजेको र कल thrill भोजन।
यदि मसलादार खाना पनि तपाईं एक शैली मा सावधानी, appetizers देखि प्रेरित तपाईं शायद इन्कार गर्न सक्नुहुन्छ। एक भन्दा रोचक र प्रकाश को - तातो खुर्सानी। यो दुई दर्जन साना कोसा धोए, obsushivayut र पुच्छर गुमाउन छन् लिन्छ। तिनीहरूले साना जार मा बाहिर राखे र गरम तेल, तिल वा राम्रो जैतून भरिएका हुन्छन्। एक हप्ता पछि तपाईं एक खाजा वोदका हुन सक्छ। र तपाईँले छल्ले वा सानो घन मा कटौती को खुर्सानी घनघोर अघि, बरु adzhika प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने।
विशेष गरी मसलादार खाना बैगुन अंतर रहन्थ्यो। तिनीहरूले सायद जहाँ यी तरकारी एक वर्ग रूपमा अवस्थित कुनै पनि देश को भान्सा छन्। आफ्नो तयारी आवश्यकता - "नीलो" को मात्र बेफाइदा। तर जब यी शेफ रोकेको छ?
तरकारी एक पाउन्ड तपाईं पातलो स्लाइस मा कटौती र एक सानो नुनीन पानी छिटो खाना पकाउनु (मिनेट को एक जोडी, छैन अब) चाहन्छु। को प्लेट त्यसपछि मात्र colander मार्फत सकिन थिए पर्छ, तर पनि एउटा सानो निचोड र त्यसपछि दुई चम्मच लिएको तेल र सोया सस को एक मिश्रण, मा तलना।
अब चटनी बनाउन: - तेल, जैतून पाँच ठूलो लसुन लौंग प्रेस मार्फत चलाउन छन्, आधा तातो मरिच सूक्ष्मता सकेसम्म कटा, सबै सिरका दुई चमचा र एक भरिएको। मसला को स्वाद जमीन मरिच लिएको र नुन को एक चमचा। खाली उम्लिरहेको पानी आधा कप भरिएको छ; एक बिट शांत एक marinade रूपमा, तिनीहरूले बैगुन स्लाइस पानी हाले। दुई घण्टा पछि एक खाजा तयार हुनेछ। तिमी धेरै मसालेदार व्यञ्जन चाहनुहुन्छ भने, मरिच को एक फली राखे। तर यो बीउ अन्यथा तीव्रता असमान बाहिर बारी सक्छ, सफा गर्न राम्रो छ।
भरी "सानो नीलो"
निम्न नुस्खा तपाईं एक धेरै तेज बैगुन, लगभग सबै मुख्य व्यञ्जन अनुरूप हुनेछ प्रदान गर्नेछ। र त्यसैले यी "नीलो" को आत्माको अन्तर्गत एक खाजा लागि उत्सव तालिका मा उच्च मांग गर्दै छन्।
दुई मध्यम आकारको तरकारी deprived बाला, चिसो पानी भरिएको र उम्लिरहेको पछि आठ मिनेट पकाउन। त्यसपछि तपाईं तिनीहरूलाई देखि अतिरिक्त तरल बाहिर squeeze गर्न, चार लोड अन्तर्गत राखिएको मा एक घण्टा बैगुन आवश्यक छ। धेरै सूक्ष्मता कटा (gagging छैन) ठूलो खुली लसुन को टाउको को "भराई" को लागि। यो सूक्ष्मता तीतो मरिच रूपमा कटा संग मिश्रित हुनुपर्छ। र follicles को आकार 1 देखि3Perchina गर्न तीव्र आवश्यकता तपाईंको सम्बन्धन आधारमा।
Cooled र थिचिएको बैगुन lengthwise कटौती, तर एक हात छाला त्यस अखण्ड रहनेछ। "बुक", सेट अंदर prisalivaem, भरने को राम्रो भाग राखे। Eggplants कैस्टर एक सेट मा थपियो र पानी आधा पतला सिरका हालिएको छन्। दिन को एक जोडी पछि, तपाईं स्वाद गर्न सक्छन्।
को बेइमान कुरा, र hrenoder र gorloder, सहिजन र प्रकाश: एक पटक यो खाली कल छैन! कुनै पनि मामला मा, जाडो को लागि आफ्नो भंडार सबै Housewives संरक्षण मा लगे। यो तयारी सरल छ, तर beriberi र स्वाद monotony देखि धेरै चिसो बचाउँछ।
अर्डर जलिरहेको प्राप्त गर्न, तर खाद्य hrenoder नुस्खा9भागहरु को एक टमाटर सहिजन मा लिन सिकाउँछ। अन्यथा, hrenovinu प्रकार छ प्रयोग गर्नुहोस्। टमाटर ठूलो (कम्तिमा यी विभाजन र मज्जा अधिकतम) र अलिकति overripe देखि आउनुहोस्। को सहिजन सफा मूल आवश्यक छैन, तपाईं बस इस्पात ऊन को भावशून्य माथिल्लो भाग RUB गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो संघटक - लसुन। Tentatively - टमाटर को दुई किलोग्राम टाउको। चौथो घटक इच्छामा पहिले नै थपिएको छ - तातो खुर्सानी hrenoder थप बलियो बनाउन।
सबै तरकारी जमीन मासु Grinder वा संयोजन, बाक्लो नुनीन, बैंकों द्वारा decomposed छन् र सामान्यतया प्लास्टिक टोपी संग बन्द छन्। को workpiece फ्रिज राम्रो छ राख्नुहोस्। Pungency त्यो 3-4 महिना हराउछ।
धिक्कार छ समान केहि नुस्खा, तर जो स्वाद र गन्ध मा सहिजन को प्रशंसक विशेष गर्नेहरूका लागि थप उपयुक्त। वा कतै गर्नेहरूलाई पनि coveted मूल लिन लागि। टमाटर तयार "स्पार्क", यो पाकेको पाँच किलोग्राम, तर अझै पनि दृढ टमाटर, अप गर्न सय एक ग्राम र लसुन पाँच ठूलो टाउको को तातो मरिच कुल वजन केही कोसा लिन्छ। स्वाभाविक, अन्तिम दुई घटक संख्या अनुसार परिवार स्वाद संग समायोजित छ। सबै तरकारी प्रोसेसर वा मासु Grinder मार्फत पारित गर्दै छन्, चटनी मा खन्याउन र चीनी को र भद्दा नुन को आधा कप बारेमा एक गिलास मिश्रण। नवीनतम एक कप को एक चौथाई गर्न पाँचौं देखि, सिरका पोखे। जनसंचार राम्ररी kneaded हुन्छ, यो जार मा प्याकेज र फ्रिज मा लुकेको छ।
यस नुस्खा पूरक गर्न सकिन्छ। कसैले केही ताजा डिल, साग साग, केही सहिजन संग "स्पार्क" संग स्वादिष्ट थप र मरिच राख्दछ र hrenoder छ भन्दा केवल सानो रकम थप्छ। धेरै रोचक यसलाई अखरोट संग गर्दछ। छोटो, तपाईंको हृदय सामग्री गर्न प्रयोग!
फ्रान्सेली मा प्याज सूप लागि "शाही" नुस्खा
स्वादिष्ट र स्वस्थ - लागि शिशुहरू zucchini को Puree
कसरी पनीर र छम संग दही एक केक खाना पकाउनु
दही गर्न स्याउ देखि मन्न। घर नुस्खा
तिनीहरूलाई कसरी कसरी प्रयोग गर्ने मशरूम अचार, र त्यसपछि
विमान पिकाटिनी र वेभर रेल
समुद्र तट "Barracuda" (एडलर) - धेरै को लागि एक मनपर्ने छुट्टी स्थान
Byzantine वास्तुकला - वास्तविकता शोभा
छत टाइल कसरी गोंद गर्न? व्यक्तिगत अनुभव
फारसी नामहरू असामान्य छन् तर सुन्दर
राउन्ड गद्दे: लाभ र बेफाइदा
"लेक Shira" (स्पा) उपचार, फोटो, समीक्षा
नाटक "53 को चिसो गर्मी"। अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र, सारांश
जब नोभेम्बर मा एक सैलुन प्राप्त गर्न? नोभेम्बर लागि Hairstyles को चंद्र पात्रो
परिभाषा, उदाहरणहरू सिद्धान्त: रसायन मा एक सूचक के हो
जीवनी Neimar र खेल उपलब्धिहरू
एडलर मा पसलहरूमा